Garsoorihii Kulankii Real Vs Juve oo xaaskiisa loo Hanjabay & Booliska oo Baaraya - Latest News Updates
Garsoorihii Kulankii Real Vs Juve oo xaaskiisa loo Hanjabay & Booliska oo Baaraya
Booliska UK ayaa baaraya fariin qoraal ah oo hanjabaadyo ah, kuwaasoo loo diray xaaska garsooraha Premier League ee Michael Oliver.
Oliver ayaa la siiyay rigoore daqiiqadii ugu dambeysay iyadoo Real Madrid ay garaacday Juventus kulankii Champions League Arbacadii, waxaana ku dhaleeceeyay goolhayaha Italy ee Gianluigi Buffon iyo qaar ka mid ah saxaafada Talyaaniga.
BBC Sport ayaa fahamsan in Oliver xaaskiisa Lucy, oo qudheeda ah Garsoore dhanka horyaalka dumarka ah, loo diray qoraalo loogu hanjabayo.
Bilayska ayaa sidoo kale raadinaya warbixinno sheegaya dadka fadhiyey albaabka hore ee guriga lamaanahaan oo ay ku qaylinayaan xadgudubka iyagoo soo maraya waraaqahooda.
Saraakisha ayaa waxay hada ay tirtireen lamberka guriga, midka telefoonka, inkastoo baraha bulshadda loogus oo goodiyay Lucy Oliver oo ay bartilmaameydsan karaan taageerayaasha qaarkood oo kuwa Juve loo malaynayo.
Buffon iyo hogaamiyaha Juventus oo mar kale wax laga weydiiyay rigooradii laga dhigaya yaa waxay mar kale difaacaanee go’aankoodii hore, kaasoo ahaa inay ahayd wax aan sax ahayn, iyadoona uu Buffon si gaar u difaacay aflagaado uu ugeystay Garsooraha.
Sikastaba, xiriirka kubada cagta Yurub wali wax war ah kama aysan soo saarin xiisaddaan hadda taagan iyo waliba weerarka dhanka baraha bulshada ah ee lagu qaaday Garsooraha xaaskiisa iyo baaritaanka hadda socda.
Michael Oliver, ayaa wuxuu ahaa sarkaalka afaraad ee ciyaartii ay guusha ka gaartay Huddersfield dhigeeda Watford, taasoo dhacday Santidii, iyadoona uu qaban doono sida jadwalka ku xusan ciyaarta Isniinta oo ay wada yeelan doonan West Ham v Stoke City.